Fameno toe-javatra toerana - Wikipedia
Ny fameno mpamari-toe-javatra na fameno mpamari-toe-javatra milaza toerana dia anjara asa fameno mpamari-toe-javatra izay manondro ny toerana ahatanterahana ny asa na ny toetra ambaran' ny enti-milaza (izay mety ho matoanteny na mpamari-toetra na teny amin'ny sokajy hafa). Amin' ny fiteny sasany dia matetika ialohavana mpampiankin-teny ny teny mitana ny anjara asa fameno toe-javatra toerana nefa tsy tokony hafangaro amin' ny fameno zoina tsy mivantana.
Ao amin'ny fitsipiteny mahazatra dia tsy misy fanavahana ny fameno mpamari-toe-javatra toerana (famenon' ny fehezanteny, azo afidrafindra sy/na foanana) sy ny fameno zoina izay milaza toerana koa (famenon' ny matoanteny, tsy azo foanana).
Araka ny haiteny ankehitriny, amin' ny fiteny frantsay dia fameno zoina (famenon' ny matoanteny) ny hoe à l'école ao amin'ny fehezanteny hoe Je vais à l'école, fa fameno teo-javatra toerana (famenon' ny fehezanteny) kosa izy ao amin' ny fehezanteny hoe Nous apprenons beaucoup de choses à l'école. Amin' ny fitsipiteny mahazatra anefa dia lazaina fa fameno toe-javatra ny hoe à l'école ao amin' ireo fehezanteny roa ireo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fameno_toe-javatra_toerana&oldid=1041565"
Dernière modification le 16 Desambra 2021, à 11:22
Voaova farany tamin'ny 16 Desambra 2021 amin'ny 11:22 ity pejy ity.